बन्द सूची पेश गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक : को–को बन्नेभए समानूपातिक सांसद ? • Janaboli
बन्द सूची पेश गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक : को–को बन्नेभए समानूपातिक सांसद ?
काठमाडौ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरुको बन्द सूची तयार गर्न सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा जारी बैठकमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउँने भावी सांसदहरुको नामावलीका विषयमा छलफल हुँदैछ । केही ब्यक्तिका विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि बैठक लम्बिएको छ । जति लम्बिएपछि कार्यालय समयभित्र आज निर्वाचन आयोगमा नामावली पेश गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।
पहिले भन्दा नियम धेरै फरक छ । आज बुझाईएको नामावलीमा निक्कै प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्नेछ । आज पेश गरेर फेरी झिक्न वा निकाल्न मिल्नेछैन । राजनीतिक दलहरुले बुझाउने बन्द सूचीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेश सभाका २२० पदका लागि दलहरुले उम्मेदवारहरुको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ । दुवै सभामा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित अनिवार्य भएकाले प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुने कारण समानुपातिकमा ५० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने महिलाबाहेक अरु सबै समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्नेछ । प्रमुख दलहरुले आदिवासी जनजाति,मधेशी,मुस्लिम,थारु र दलितलगायत सबै ‘क्लस्टर’बाट महिला उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै बुझाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनले केन्द्र र प्रदेशका लागि अलगअलग स्थानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि ८८ दलले आयोगका निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिक उम्मेदवार उठाउँदा दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन अनुसार जातीय क्लस्टर मिलाउनुपर्नेछ । कानुनले १३.८ प्रतिशत दलित उम्मेदवार उठाउन भनेको छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति २८ दशमलब ७, खसआर्य ३१ दशमलब २, मधेशी १५ दशमलब ३, थारु ६ दशमलब ६ र मुस्लिम ४ दशमलब ४ प्रतिशतको आधारमा उम्मेदवारहरुको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ ।